ပင်မစာမျက်နှာ OCEANIA ဘောလုံးပုံပြင် တိ Cahill ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
LB အကောင်းဆုံးအမည်ဝှက်ခြင်းဖြင့်လူသိများနေတဲ့ဘောလုံးပါရမီ၏အပြည့်အဝပုံပြင်တင်ဆက်; '' Timmy ''။ ကျွန်ုပ်တို့၏တိ Cahill ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ရက်စွဲကိုမရောက်မှီတိုင်အောင်သူ၏ကလေးဘဝအချိန်ကနေသင်တို့ကိုမှတ်သားလောက်ဖြစ်ရပ်များနှင့်ပြည့်ဝ၏အကောင့်တတ်၏။ analysis ကျော်ကြားမှု, မိသားစုဘဝနှင့်သူ့ကိုအကြောင်းကိုအများအပြား OFF နှင့် on-အသံနည်းနည်းလူသိများအချက်အလက်များရှေ့တော်၌မိမိဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိပါဝငျသညျ။ သံသယမရှိဘဲ, တိ Cahill သြစတြေးလျရဲ့အအောင်မြင်ဆုံးအားကစားသမားတစ်ဦးအဖြစ်မှတ်ယူသည်။ ယခုသူ၏လူတစ်ဦးသို့ငုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
တိ Cahill ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts-ဘ0အစပိုင်း
Cahill အိုင်းရစ်နွယ်ဖွား (က Tim Cahill ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၏) နှင့်တစ်ဦး၏အင်္ဂလိပ်ဖခင်မှဆစ်ဒနီရှိ6ဒီဇင်ဘာလ 1979 ရက်နေ့တွင်မွေးဖွားခဲ့သည် အဘိဓါန် Samoan မိခင် (Sisifo Cahill) ။
သူကအလွန်ကြီးမားတဲ့အတွက်ကြီးပြင်းပေမယ့်သူကလေးတစ်ဦးအဖြစ်ဘောလုံးကစားရန်အားပေးတိုက်တွန်းခဲ့သည် ရပ်ဂ်ဘီလိဂ်မိသားစု -playing ။ ကြောင်းနေသော်လည်းတိအတွက်အတိုး ယူ. , ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ။ သူ့အကြိုက်ဆုံးဝါသနာတစ်ခုမှာပရီးမီးယားလိဂ်စောင့်ကြည့်ခဲ့သည်။ အကောင်းဆုံးကတော့, သူသည်အများသောသြစတြေးလျလုပ်ဖို့ခဲယဉ်းတွေ့ရှိခဲ့ဘာလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ရုံတိုင်းတစ်ခုတည်းအင်္ဂလိပ်လိဂ်အရေးယူစောင့်ကြည့်ဖို့သောညဉ့်သေလွန်သောသူတို့သည်နာရီ (12 နံနက်: 00 လယ်ပိုင်း night-400) မှာနိုးတည်းခိုဖြစ်ပါတယ်။
အဖြစ်ဝေးဘောလုံးစိုးရိမ်ပူပန်ဖြစ်ပါတယ်သကဲ့သို့, ကြမ်းတမ်းသြစတြေးလျနှင့်ဗြိတိန်အချိန်ကွာခြားချက်ဂိမ်းကိုစောင့်ကြည့်ကနေအများအပြားအတားအဆီးဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ အဟောင်းအနည်းငယ်5တစ်နှစ်အဖြစ်သူအဲဗာတန်ဘောလုံးကလပ် supporting ကြီးပြင်းလာတယ်။ နှစ်လယ်ပိုင်း 80 ရဲ့ကြီးစိုးအင်္ဂလိပ်ဘောလုံးလောကမှာအဖြစ်ကလပ်။ သူတို့ဟာ 1985 / 1986 နှင့် 1986 / 1987 ရာသီအတွင်းပရီးမီးယားလိဂ်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ တိသည်သူ၏အနှစ်သက်ဆုံးအဲဗာတန်တိုက်စစ်မှူးအနေဖြင့်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်သင်ယူခြင်းကြီးပြင်း, ဂယ်ရီ Lineker.
ညဉ့်ကိုအသေနာရီမှာနိုးဖြစ်ဘို့အသက်ပျိုသောဆိတ်သငယ်ကြောင့်လက်မခံနိုင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ တိ Cahill တက်သန်းခေါင်အားဖြင့်လည်းတစ်ဦး ardent အင်္ဂလိပ်ဘောလုံးထောက်ခံသူသူသည်သူ၏ဗြိတိသျှတို့မွေးဖွားအဘ၏လက်မှဖြစ်အထူးခွင့်ပြုချက်ရှာခဲ့ရသည်။ ဒီတော့သူတို့ထဲကနှစ်ဦးစလုံးအတူတကွစောင့်ကြည့်။ တိအဆိုအရ,
တကယ်တော့ရုပ်ရှင်မကြည့်ကြဘူး။ ငါပရီးမီးယားလိဂ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ play သို့မဟုတ်စောင့်ကြည့်ဦးမည်ဖြစ်စေ။ ငါဆိအဖြစ်ပရီးမီးယားလိဂ်အတွက်ဂိမ်းစောင့်ကြည့်ဖို့ပျော်မွေ့။ ငါဖြေလျှော့ဘယ်လောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အစဉ်မပြတ်ငါတောင်မှကမ္ဘာ့ဖလားနှင့်တူသောအရာတို့သည်ပရီးမီးယားလိဂ်ဘောလုံး၏စင်္ကြံထဲမှာပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း ... မြင်နေရတယ်။ ငါ ပြန်ပြီးတော့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကစားသမားကိုကွောကျရှံ့ခဲ့သည်။ ငါ ", ၎င်းတို့၏အခွက်တဆယ်ကိုတန်ဖိုးထား သူကပြောပါတယ်။
"အဲဒီအချိန်တုန်းကတက်ကြွစွာဘောလုံးသမားအဖြစ်, ငါကစင်ပေါ်မှာရဖို့ဘယ်လောက်ခက်တယ်စဉ်းစား, ထိုအရပ်ဖြစ်ကြောင်းကိုအခါ, ငါလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတစ်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းထဲမှာတန်းစီနဲ့ကျွန်မလာမယ့်ဂိုးသွင်းဘုရင်ရွိုင်းမှမတ်တပ်ရပ်တာကိုမြင်ရ, ငါ ' လာမယ့်သီယာရီအွန်နရီ, ရော်ဘီနှင့်ရွိုင်းကိန်း, Owen, နဲ့ Robert Pires မှရပ်နေပါ။ ဒါဟာ "Wow, အသက်ရှင်ခြင်းကိုငါ၌နောက်ဆုံးတော့လုပ်ပြီးပြီ" အကြောင်း, ငါသည်ကိုယ်ကိုပြောပြကြောင်းကိုအမှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါငါ ", တဖန် t ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောပြဤနေရာတွင်ငါသည်သူတို့၏ဂျာစီတစ်ဦးမရှိဘဲဤအစေးပယ်လာမယ့်တာမျှလမ်းဖွင့် "။ "
ဒါဟာက Tim Cahill ရဲ့မိဘများထိပ်မှာသူ့ကိုရဖို့အကြီးမြတ်ဆုံးယဇျပူဇျော၏တဦးတည်းကိုဖန်ဆင်းသည်ဟုအခိုင်အမာရန်ထိုက်၏။ ဒီရှည်လျားအပိုင်းအစရှင်းပြပါလိမ့်မည်။ သူ့မိဘကသူ့ထောက်လှမ်းရေးကိုချစ်။
တိ Cahill ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts-ရပ်ဘီကနေဘောလုံးမှ
တိ Cahill ဘောလုံးမေ့လျော့ခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏ဂိမ်းမှာစတင်ထားရန်သူ့ကိုယုံကြည်သူကိုဝမ်းကွဲကစားသည်သူ၏ stocky ရပ်ဘီလိဂ်ကဝိုင်းကြီးပြင်းလာတယ်။ အနည်းငယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်အဖြစ်သူတစ်ခါတစ်ရံတွင်ရပ်ဘီကစားဖို့လိုက်ကြ၏။ သူသို့ရာတွင်သူ၏ဝမ်းကွဲကိုခစျြထဲကဂိမ်းကိုချစ်သောကြောင့်သူမကိုပြု၏။
ကိုယျတျောသညျမိမိအဘ (တိ Cahill ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၏) သူ့ကိုသူဖြစ်လာချင်ခဲ့တယ်ဘာမှဖြစ်လာချင်တယ်။ ဒါဟာအကြမ်းဖက်ရပ်ဘီကစားသူမ၏သားငြင်းပယ်သောသူ၏မိခင် (Susifo) ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမသည်ဂိမ်းကိုပိုပြီးအန္တရာယ်ကြီးနှင့်သူ၏သားကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကနေဒဏ်ရာရရနိုင်ကြောက်ရွံ့ကြ၏။
သို့သော်အဆက်မပြတ်သူမ၏သားဒဏ်ရာရရှိ stocky ကစားသမားသူမ၏စိုးရိမ်မှုတွေစိုးရိမ်ပြီးနောက်သူမကသူတစ်ဦးအဖြစ်ရည်ညွှန်းအရာကိုပယ်သူ့ကိုချီတက်ရန်သူမ၏ခင်ပွန်းအတင်းအကျပ် "ဘေးကင်းအားကစား" ဘောလုံး၏။ တိ၏ညီဖြစ်သူ Sean အတူတူဘောလုံးနောက်တော်သို့လိုက်မှီကတာရှည်မယူခဲ့ပါဘူး။
တိ Cahill ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts-ဘယ်လိုသူကအင်္ဂလန်မှရတယ်
နှစ်ဦးစလုံးမိဘများ (က Tim Cahill ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၏နှင့် Sisifo) အတူတူအင်္ဂလန်မှ၎င်းတို့၏သားတဦးတည်းရမယ့် $ 10,000 ချေးငွေခြစ်။ သူတို့ကမှုကြောင့်အင်္ဂလိပ်ဘောလုံးအဘို့မိမိအရှည်လျားရပ်တည်မှုချစ်ခြင်းမေတ္တာတိပါလိမ့်မယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါမိသားစုဒါဟာသူ့ရဲ့သြစတြေးလျ Talent: တခုအဖြစ်အားမိမိသာအခွင့်အလမ်းပါလိမ့်မယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကကင်းထောက်နှင့်၎င်းတို့၏သားနှင့်အတူတွန်းအားပေးကို လုပ်. , တိယခုနှစ် 1998 အတွက် Millwall FC အသင်းနှင့်အတူစမ်းသပ်မှုတွေကျင်းပရန်လန်ဒန်ခရီးထွက်ခဲ့တယ်။ တိခရီးထွက်ပြီးနောက်သူ့မိသားစုကိုနိုင်အောင်ကိုဖဲ့ခဲ့သည်။ သူ့ညီအလုပ်ရရန်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုရပ်တန့်ခဲ့ရသည်။ သူကအိမ်မှာထောက်ခံမှုဘဏ္ဍာရေးကူညီရန်ပြု၏။
တိအဆိုအရ, "သို့သော်ယနေ့တိုင်အောင်, ငါစဉ်းစားမယ့်နေ့ကအဲဒီမှာမဟုတ်ဘူး။ ငါ ", လှပတဲ့အမာရွတ်ခေါ် သူကပြောပါတယ်။
သူ left ပြီးနောက်သူ့မိသားစုကိုသူတို့ချေးငွေဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့ငွေရေးကြေးရေးရုန်းကန်။ သူတို့ကနှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးစက်ရုံထဲမှာမဆုပ်မနစ်နာရီကြာအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်နှင့်၎င်းတို့၏သားကလုပ်သောသည်အထိလူနေမှုနိမ့်စံခဲ့ရသည်။
သူ့မိခင်ရဲ့အဆိုအရ, "ကျနော်တို့ကငွေရေးကြေးရေးအဘယ်သူမျှမရှေးခယျြမှုရရှိပါသည်။ ကျနော်တို့ကသူ့အိပ်မက်တွေမှတဆင့်သူ့ကိုကြည့်ဖို့ Moni မတတ်နိုင် coudn't ။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တစ်ဦးချေးငွေယူခဲ့ရတယ်။ ကျနော်တို့နှစ်ပေါင်းကိုက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ယဇ်ပူဇော်ခြင်းကိုပယ်ပေးဆောင်ပျော်ရွှင်ကြသည်။ ငါတို့အလိုအားလုံးသူ့ကိုပရီးမီးယားလိဂ်ကစားမယ်လို့သူတစ်ဦးဘောလုံးသမားအဖြစ်အောင်မြင်သောဖြစ်လာဘို့ဖြစ်ခဲ့သည်။ "ဒါဟာနောက်ဆုံးတော့မှတဆင့်သို့ရောက်လာသောဝမျးသာ
Cahill အင်္ဂလန်မှာရောက်တုန်းသူတစ်ဦးတဦးတည်းအိပ်ခန်းအိမ်သူအိမ်သားငှားရမ်းထားသော။ သူကသူ့စမ်းသပ်မှုတွေအတွက်အောင်မြင်မှုရရန်ခဲယဉ်းစစ်တိုက်ကြ၏။ Fortuantely, သူ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုချွတ်ပေးချေ။ သူကတစ်နှစ် 1998 အတွက် Millwall ကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သူ့စာအုပ်အတွက် '' တိ Cahill အမွေအနှစ် ''သူ 5,000 ပေါင်လက်မှတ်ထိုး-on ကိုအခကြေးငွေဖြောင့်အိမ်ကချေးငွေများအတွက်ပြန်ဆပ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်စေလွှတ်တော်မူသောရေးသားခဲ့သည်။
ကိုယျတျောသညျသူ၏ဘောလုံးလုပ်ခလစာအနိမ့်ခဲ့သည်။ သူကဆဲချေးငွေဝန်ဆောင်မှုပေးသိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်ပင် 5,000 ပေါင်အိမ်ကစေလွှတ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါမိသားစုထို့နောက်ငွေနှင့်အိမ်တအိမ်ပေါ်က၎င်း၏ပထမဆုံးသိုက်တို့ကိုလည်းလုပ်လေ၏။
တိ Cahill ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts-အဆိုပါရပ်ဘီမိသားစုကော်နက်ရှင်
တိ Cahill ၏အစ်ကိုဖြစ်ပါတယ် အဘိဓါန် Samoan ဘောလုံးသမားဟောင်းဆာမိုအာကပ္ပတိန်, ခရစ် Cahill. မိမိဆွေမျိုးထဲကအတော်များများရပ်ဂ်ဘီတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်။ Infact သုံးဝမ်းကွဲပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရပ်ဂ်ဘီကစားခြင်းအတွက်စေ့စပ်ပြီ။ သူတို့ဟာ incluse ဘင် Roberts သည် (နယူးဇီလန်ရပ်ဘီအသင်း) ,, နှင့် ဂျယ်ရမီတန်လေ (နယူးဇီလန်ရပ်ဘီပြည်ထောင်စုနေ့) ။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရပ်ဂ်ဘီလိဂ်ကစားသမားများမှာအဘယ်သူတူကိုတဖနျ, နှစ်, Chase Stanley နှင့် Kyle Stanley ရပ်ဘီပြည်ထောင်စုပညာရှင်များဆမ် Stanley (Saracens & အင်္ဂလန် U20) နှင့်ဆက်စပ်သောနေကြတယ်, သူ Mike Stanley (ဆာမိုအာ), Benson Stanleyနှင့် Winston Stanley.
တိ Cahill ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- relationship ဘဝ
တိ Cahill မေလ 2010 အတွက်ကလေးဘဝရည်းစား, ရေဗက္က Greenhill လက်ထပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါစုံတွဲသည်မကြာမီအတူတကွသားသမီးလေးယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာပုံမှန် Las Vegas မှာမင်္ဂလာဆောင်မဟုတျဘူး, ဒါပေမယ့် 50 စောင့်ကြည့်မိတ်ဆွေတွေကိုထောက်ပံ့ကျော်နှင့်အတူကမ္ဘာကျော် Bellagio ဟိုတယ်၌တည်ခင်းဧည်ခဲ့သည်။ မိမိအမင်္ဂလာဆောင်နေ့တှငျက Tim Cahill သူ့ဇနီးကလည်း, "သင်တို့သည်ငါ၏အကောင်းဆုံးအိမ်ထောင်ဖက်ကို, ငါ့အရာအားလုံးပါပဲ။ "
တိ Cahill အပါအဝင်သူနှင့်ဇနီးရေဗက္ကအခြားဘောလုံးသမားများ၏အကြိုက်နှင့်သူတို့၏ဇနီးများကဦးဆောင်သည့်အောင်မြင်ကျော်ကြားပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေစုံတွဲအခြေအနေနှင့်လူနေမှုပုံစံစတဲ့ လိုက်. ဖူးဘူးကပြောပါတယ် ဒါဝိဒ်သည် နှင့် ဗစ်တိုးရီးယားဘက်ခမ်း။ အဆိုပါအာရုံစိုက်ဇနီးနှင့်ကလေးတွေနှင့်အတူတစ်ကိုယ်တော်ကြိမ်ဖြုန်း, တစ်ဦးရိုးရှင်းသောဘဝအသက်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာတိကသူ့ကလေးတွေနှင့်အတူလက်ကမ်းစာစောင်မှချစ်ကြောင်းသတိပြုပါရန်ဆိုင်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို, "ကလေးတွေအရာအားလုံးက"
တိကယ့်ကိုတက်ကြွအားကစားချစ်သူများနေသောလေးခုကလေးတွေရှိပါတယ်။ သုံး (3) ၏သားတို့သည် Kyah, Shae နှင့်အငယ်ဆုံးတဦးတည်းအဘယ်သူမျှမထုတ်ဖော်အမည်နှင့်သမီး Sienna ရှိပါတယ်အမည်ရှိ။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏အိမ်ထောင်ဖက်ရေဗက္က Cahill မှလာကြ၏။
တိ Cahill ဖြည့်ပါမပြည့်စုံခြင်းနှင့်ပျော်ရွှင်စေသည်ဘယ်အရာကိုနောက်ဆုံးမှာဆုဖလားကျင်းပနေချိန်မှာချစ်စရာကောင်းတဲ့ကလေးတွေဝိုင်းရံခံရ။ တခါကလည်းပြည့်စုံမိသားစုသည်လူ '' မိသားစုကိုအမြဲဘောလုံးမတိုင်မီပထမဦးဆုံးရောက်ရလိမ့်မည် ''
"ငါ့မိသားစုနှင့်အတူပျော်ရွှင်မှုကိုဦးတှေ့ကွုံတဦးတည်းအရာတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အရှိသမျှတို့ကိုငါ, ငါ၏ဘဝတစျခုလုံးခဲ့ပါတယ်။ ပင် [ဘောလုံး] ကြောင့်နှင့်တကွကြွလာသည်ဟုအခြားအရာအားလုံးအတုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ငွေ, စာချုပ်များနှင့်သတင်းစာခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်။ သငျသညျအကြှနျုပျကိုချွတ် tommorrow အရာအားလုံးယူနိုင်ကြောင်းမိသားစုကိုဘေးဖယ်, ငါသည်နေဆဲပျော်ရွှင်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ငါ့မိသားစုသည်အတိုင်းရှည်လျားကြောင်း "ငါ့အဘို့တကယ်အရေးပါသောသူအပေါင်းတို့သည်င်အတူတကွအလွန်နီးကပ်နေထိုင်နေကြရသည်။
တိ Cahill အစားသူသိတယ်အဘယ်အရာကိုအာရုံစိုက်ဖို့ရှေးခယျြရာတှငျ, အထူးဘာမှအဖြစ်သူ၏ status ကိုမမြင်ရပါဘူး။ သူဟာကျွမ်းကျင်တဲ့နည်းပြများကပဲ့ထိန်းခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်ဆင့်ဆော့ကစားရန်အခွင့်အလမ်းများကိုများနိုင်ဘယ်မှာအခြေအနေများတွင်သူ့ကိုချပြီးသူ့မိဘများဂုဏျ - လူတွေအများကြီးကိုသူအချိန်အတွက်တစ်ချိန်ချိန်တဲ့ professional ဘောလုံးသမားဖြစ်သေးငယ်လွန်းသောသူ၏ပြောသည်သော်လည်း ။
တိ Cahill ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts-ဝက်ဗြိတိန်, ဝက် Somoan
Cahill ရဲ့မွေးရပ်မြေဆစ်ဒနီ, သြစတြေးလျဖြစ်သော်လည်းသူ့ဖခင်အိုငျးရစျနွယ်ဖွားဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့မိမိအသက်ကာလအတွင်းအင်္ဂလန်တွင်နေထိုင်ခဲ့သည်။ Cahill တစ်ဦးသောသူသည်မိမိအမိကိုမှသူ၏မှောင်မိုက်အသားအရေရရှိသွားတဲ့ အဘိဓါန် Samoan ဇာတိ။
Cahill သည်သူ၏ဖခင်ကြောင့်အိုင်ယာလန်ကိုကိုယ်စားပြုရန်ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟုဆိုသော်လည်းသူသည် Samoa နှင့် Australia တို့ကိုသာကိုယ်စားပြုသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း.
တိ Cahill ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts-အလုပ်ရှာဖွေရေးအကျဉ်းချုပ်
အသက်ပျိုစဉ်အခါများတွင် Cahill အတွက် Balmain ရဲတပ်ဖွဲ့ Boys ကလပ်, Marrickville ဘောလုံးကလပ်နှင့် Plumpton / Oakhurst ဘောလုံးကလပ်များအတွက်ဘောလုံးကစားခဲ့ပါတယ်။
သူကကျရှငျခဲ့ကာကလေးငယ်အဖြစ်တစ်ဦးတိုတောင်းသောအချိန်များအတွက်ဆာမိုအာဘောလုံးကစားခဲ့ပါတယ်။ သူဟာအသက်အရွယ် 14 မှာ Samoan အဘိဓါန်အမျိုးသားရေးဘောလုံးအသင်းကိုယ်စားပြုသည်။ Millwall FC အသင်းများအတွက်ဘောလုံးကစားရန် 1998 အတွက်အင်္ဂလန်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ အချိန်ပေါ်သွားသူ Millwall ရဲ့ scuad ၏အရေးပါသောအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူသာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက် 2003-2004 မှဆုံးရှုံးဖို့, FA ဖလားဗိုလ်လုပွဲရောက်ရှိရန် Millwall ကကူညီပေးခဲ့သည့်အခါ Cahill ရဲ့လူကြိုက်များသာတကယ် 3-0 ရာသီအတွက်ကိုချွတ်လိုက်တယ်။ ဤသည်အဲဗာတန်အတွက်အကျိုးစီးပွားသတိပေးခံရ။ တိ Cahill အဲဗာတန်ရဲ့ကင်းထောက်ခြင်းဖြင့်ပြောက်ခဲ့ 2004 ၏နွေရာသီအတွက်သူ Goodison Park တွင်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ သူကချက်ချင်းအတွက်တပ်ဆင်နှင့်အဲဗာတန်ရဲ့ထိပ်တန်းဂိုးသွင်းအဖြစ်ရာသီပြီးဆုံးနှင့်ယခုနှစ်အဲဗာတန်ရဲ့ကစားသမားကစားသမားမဲပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုနှစ်တွင်ပင်မှာ, သူ 2004 အတွက်သြစတြေးလျရဲ့အမျိုးသားရေးအဖွဲ့ Socceroos ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ အင်ျဂလိပရီးမီးယားလိဂ်နီးပါးဆယ်စုနှစ်တစ်ခုများအတွက်အဲဗာတန်နှင့်အတူကစားပြီးနောက်သူက New York Red Bull join ဖို့ 2012 အတွက်အမေရိကန်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ အဲဒီမှာသူမ၏ 2013 အတွက်ရွှေ Boot ကိုနှင့် MVP ချီးမြှင့်ခံခဲ့ရသည်။ သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးဦးတည်ရာကိုတရုတ်စူပါလိဂ်အတွက်ရှန်ဟိုင်း Shenhua အသင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ မိမိအဘွတ်ဖိနပ်ကြိုးဆွဲချပြီးနောက်သူဟာယူနီဆက်သံအမတ်ကြီးအဖြစ် appionted ခဲ့သည်။
တိ Cahill ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts-ယဉ်ကျေးမှုနှုတ်ဆက်ပြီးသူ
တိ Cahill အသက်တာ၌ရှည်လျားသောလမ်းလာခဲ့ပါသည်။ "သြစတြေးလျကနေလာမယ့်, လန်ဒန်, မန်ချက်စတာလီဗာပူးလ်, ဆစ်ဒနီ, နယူးယောက်, ပြီးတော့ရှန်ဟိုင်းတွင်နေထိုင်သောကျွန်မတစ်ဦးစွန့်စားမှုကြောင့်ကုသပါတယ်" သူကရှင်းပြသည်။
"ငါသည်ခပ်သိမ်းသောယဉ်ကျေးမှုများ, အစားအစာ, လူများတို့သည်လူနေမှုပုံစံစတဲ့နှုတ်ဆက်ပြီးပါတယ်။ "
သို့သော်ရှိသမျှသောအစွန့်စားမှုနှင့်အတူ, Cahill သူ့အိပ်မက်အတိုင်းလိုက်နာရန်အဘို့အသူ၏မိသားစုဖန်ဆင်းပူဇော်သောယဇ်များကိုအဆက်မပြတ်သတိထားမိသည်။
တိ Cahill ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts-2 ဘောလုံးအကယ်ဒမီအပြေး
သူ့ကိုအကြောင်းကိုနောက်ထပ်အေးမြတကယ်တော့သူနှစ်ဦးကိုဘောလုံးအကယ်ဒမီပြေး, သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ Wollongong ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့်သူ Elite အားကစားအကယ်ဒမီနှင့်အတူ ပူးပေါင်း. ပြေးရသောအခြားဒူဘိုင်း၌တည်ရှိ၏အဝန်းလူငယ်ကလပ်၏မိတ်ဖက်နှင့်အတူ Wollongong သြစတြေးလျအတွက်တဦးတည်း။ နှစ်ဦးစလုံး 2009 အတွက်ဖြန့်ချိခဲ့ကြသည်။
တိ Cahill ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts-ခြောက် (6) နှစ်များအတွက်ထောင်ချအစ်ကို
2008 ခုနှစ်, Sean Cahill တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမြင်နိုင်သည်သူ၏သားကောင်ကျန်ရစ်ကြောင်းဗြိတိန်နိုင်ငံအနေနဲ့ချေမှုန်းရေးတို့အတွက်ခြောက်နှစ်အကျဉ်းချခဲ့သည်။
သူ၏ '' ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာနဲ့ကြောက်စရာ '' မိမိအသားကောင်အပေါ်ချေမှုန်းရေးသူ့ကိုဗြိတိန်နိုင်ငံကအန္တရာယ်များတဲ့လူကိုတံဆိပ်ကပ်။
သူကပထမဦးဆုံးဇူလိုင်လ 11, 2004 ပေါ် Orpington ကနေခရစ် Stapely တိုက်ခိုက်ခြင်းများအတွက် Croydon Crown တရားရုံးကနေကြမ်းတမ်းသောခန္ဓာကိုယ်ထိခိုက်မှု၏ပြစ်မှုထင်ရှားခဲ့သည်။
စုံစမ်းစစ်ဆေးသူအကြိမ်ကြိမ်ကျိုးအံသွားနှင့်သူ၏လက်ျာမျက်စိတစ်ပြတ်လှာနှင့်အတူ Semi-သတိသူ့ကိုထွက်ခွာအရှေ့လမ်းတစ်တက္ကစီရုံးအနီးရှိဦးခေါင်း၌သားကောင်မစ္စတာ Stapely ကန်ဖော်ပြခဲ့တယ်။ မစ္စတာ Stapely, သားကောင်ချို့ယွင်းဗျာဒိတ်ရူပါရုံတစ်ဦးဘဝကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်များနှင့်မဟုတ်တော့တဲ့အရေအတွက်မြေတိုင်းစစ်ဆေးအဖြစ်သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအပေါ်သယ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
ဝပ် Cahill ထပ်တလဲလဲမစ္စတာ Stapely တိုက်ခိုက်ခြင်းငြင်းပယ်သူဆစ်ဒနီ, သြစတြေးလျအတွက် re-ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်မတိုင်မီပင်သူ့အိမ်တိုင်းပြည်သြစတြေးလျမှ absconded ။
Constable Bromley ရဲတပ်ဖွဲ့ထံမှမျှော်လင့်တော်မူမည်စုံထောက် said: "ဟု Mr Stapely တစ်ဦးရက်စက်စွာနှင့်ကြောက်စရာချေမှုန်းရေးခဲ့တယျအဘို့တရားသဖြင့်စီရင်ကြည့်ဖို့သုံးနှစ်ခွဲကျော်စောင့်ဆိုင်းလျက်ရှိသည်။
Sean Cahill ပင်ဆွဲဆောင်မှုမှုခင်းသက်သေအထောက်အထား၏မျက်နှာကိုအတွက်, မိမိပါဝင်ပတ်သက်မှုငြင်းဆိုခဲ့သည်။ သူကသြစတြေးလျကနေလွှဲပြောင်းခံရပြီးနောက်ထောင်ဒဏ်ခြောက်နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါဝါကျရုံးတင်စစ်ဆေးရပ်တည်ရန်တရားရုံးကသူ့ကိုရောက်စေဖို့ခေါ်ဆောင်သွားအားလုံးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတစ်ခုဖြောင့်မတ်ခဲ့သည်။
တိ Cahill ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- သူ့အစ်ကိုရဲ့ဖမ်းဆီးထောင်ချမှုများကိုတုံ့ပြန်
သြစတြေးလျကွင်းလယ်လူတစ်ချိန်ကသွင်းယူသူလက်ထိပ်ခတ်ခြင်းနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်သူသည်ရည်မှန်းချက်ကိုဆက်ကပ်အပ်နှံခဲ့သည်ထင်ရှားခဲ့သော်လည်းအဖြစ်သူ၏လက်ကောက်ကိုဖြတ်ကူးခြင်းဖြင့်ဆင်နွှဲ - တစ် 3-1 အတွက်အဲဗာတန်ရဲ့ဒုတိယ Goodison Park မှာအနိုင်ရ - အဘို့အခြောက်နှစ်ထောင်ချခံရသူသူ့အစ်ကို Sean မှ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည်လူကိုမျက်စိကွယ်။ ဒါဟာ Cahill လူသိရှင်ကြားဝါကျအသိအမှတ်ပြုသောပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။
Cahill said: "အခြေခံအားဖြင့်ကငါ့အစ်ကိုများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ လူတိုင်းကိုငါ့အခွအေနေကိုသိနှင့်ငါသူပျော်ရွှင်သည်နှင့်ငါဝမ်းသာတယ်နှင့်အစဉ်မပြတ်ငါသူ့ကိုစဉ်းစားတာကြောင့်ပဲဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ငါ့မိသားစုငါ့ထံသို့တွေအများကြီးကိုဆိုလိုသည်နှင့်ဒါဒီဘောလုံးကလပ်ပါဘူး။ ဒါဟာနည်းနည်းစိတ်ခံစားမှုခဲ့ပေမယ့်အကောင်းမယ့်ပါတယ်။ "
တစ်ဦးအဲဗာတန်ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ပွဲကျင်းပမသင့်လျော်အဖြစ်ရှုမြင်ခံရအံ့သောငှါဝေဖန်မှုများထံမှ Cahill ခုခံကာကွယ်ခဲ့သည်။
သူအချို့တို့သည်အခမ်းအနား၏မျက်နှာသာအတွက်ဖြစ်မဟုတ်ဘူးလို့သိကြှမျးသောကား, ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကဆိုပါတယ်: "ပန်းတိုင်အထိမ်းအမှတ်ပွဲများကျင်းပပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိစ္စဖြစ်ကြောင်းနှင့်ဆုံးဖြတ်ရန်ကစားသမားမှတက်, မတဦးတည်းကစားသမားအဖြစ်ကြာမြင့်စွာကသတိပြုဖို့လိုဖြစ်ပေါ်ပါဘူးအဖြစ်, နေသမျှကာလပတ်လုံးသူဂိမ်း၏ဥပဒေများအတွင်းအဲ့ဒီအချိန်မှာအဖြစ်အဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်ဆိုထားသည်။ "
တိ Cahill ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- သြစတြေးလျရဲ့အကြီးမြတ်ဆုံးပန်းတိုင်အလံ Boxer
တိ Cahill ရဲ့ရည်မှန်းချက်အမှတ်ပေးသူရဲကောင်းအဘယ်သူမျှမဘောငျကိုငါသိ၏။ သူကသုံးသီးခြားကမ္ဘာ့ဖလားဖလားနှင့်သုံးအာရှဖလားမှာဂိုးသွင်းဖို့သမိုင်းမှာပထမဦးဆုံးကစားသမားဖြစ်ခဲ့သည်။ သမိုင်း၌သာလျှင်ရှစ်ကစားသမားသုံးသီးခြားကမ္ဘာ့ဖလားဖလားမှာသွင်းယူပြီ Cahill, ဗန်ပါစီ, Arjen ရော်ဘင်, ရောဘတ် Baggio, Jurgen Klinsmann နှင့် Lothar Matthaus ။ Pele နှင့်သူ Uwe Seeler လေးသီးခြားကမ္ဘာ့ဖလားဖလားမှာသွင်းယူခဲ့ကြပါတယ်။
သူကတစ်ဦးရည်မှန်းချက်သွင်းယူထားပြီးရသောအကြောင်းကို 30 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂိမ်းအဘို့, သြစတြေးလျ 19 အနိုင်ရရှိလိုက်ပြီ, ငါးဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းနှင့်ခြောက်လရေးဆွဲ။ 0.4875 သူ၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်-per-ဂိမ်းအချိုး 44 ထုပ်၏နိမ့်ဆုံးနှင့်အတူအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကစားသမားတို့တွင် All-အချိန်စာရင်းထဲမှာသူ့ကို 20th နေရာ။
တိ Cahill လိုက်. နှင့်အဲဗာတန်အသင်းနှင့်အတူသူ၏အိပ်မက်နှင့်အတူနေထိုင်ခဲ့ဖူးသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအမြဲတမ်းအဲဗာတန်ကစားရန်သူ၏ကလေးဘဝအိပ်မက်ခဲ့သညျ။
တိ Cahill ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts-ပန်းတိုင်ပွဲအမှတ်တံဆိပ်မှားသွား
တိ Cahill ရဲ့အရိပ်လက်ဝှေ့ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အခမ်းအနားတစ်ချိန်က cheeky ဘောလုံးကိုကောင်လေးအားဖြင့်အပေါ်သို့နင်းခဲ့သညျ။ go-မှအခမ်းအနား: ထောင့်အလံပြေးအရိပ်လက်ဝှေ့ကိုစတင်ပါ။ အဆိုပါ cheeky ဘောလုံးကိုကောင်လေးဗဟိုကမ်းခြေသင်ျဘောသားမှာမဲလ်ဘုန်းမြို့စီးတီးရဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်အတွင်းသြစတြေးလျရဲ့ဒဏ္ဍာရီလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တွေနဲ့ဖျက်ဆီးပါသညျဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
Cahill ကိုသာအရှုးလူကလေးအတွက် Turf ချွတ်ဆွဲနဲ့သူ့အရိပ်လက်ဝှေ့ကြိုးပမ်းမှုတားဆီးနောက်ပြန်လမ်းလျှောက်ခဲ့သောထွက်ရှာတွေ့မှသွင်းယူပြီးနောက်ထောင့်အလံဆီသို့ကြိုတင်ခန့်မှန်းတွက်ဆ jogged ။ ဒီစောင့်ကြည့်အပေါ်သို့တိပုပါးလွှာလေထုသေတ္တာခဲ့ရသည်။
တိ Cahill ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts-မေးနှင့်အမျှ
တိ Cahill - "ငါသည် 90 မိနစ်လယ်ပြင်ကိုကျော်အားလုံး Sprint နိုင်သူတစ်ဦးကစားသမားမဟုတ်ပါဘူး။ ငါ့အဘို့ထိုသို့အခွင့်အလမ်းကြွလာသောအခါ, ငါနောက်ခံလူထက်ပိုမိုမြင့်မားခုန်သို့မဟုတ်ပထမဦးဆုံးဘောလုံးကိုဖို့ငါးမီတာ Sprint ဖြစ်စေလျက်, အမြန်ဆုံးတုံ့ပြန်နိုင်အောင်ပေါက်ကွဲဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုပါပဲ။ ငါ "ကြိုးစားကြည့်နဲ့ကျွန်မအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရာ၏အများဆုံးအလင်းအလေးနှင့်အတူပေါက်ကွဲလှုပ်ရှားမှုများကိုကြောင်းကိုဒါငါ့အအားကစားရုံအလုပျထဲမှာပုံတူပွား
ငါ့အဘို့ငါသညျငါ့ရသေချာအောင်ဂိမ်းမီည carbs နှင့် ပရိုတိန်း ဒါကြောင့်ကြက်သားနှင့်အတူခေါက်ဆွဲငါ့ကိုယ်ကပွဲစဉ်များအတွက်လိုအပ်နေပါသည်အားလုံးစွမ်းအင်ရှိကြောင်းသေချာစေရန်အကောင်းတစ်လမ်းဖြစ်၏။
ငါ့အဘို့ကအားလုံးကိုသင့်ခန္ဓာကိုယ် သိ. နှင့်စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် ပတ်သက်. ပါပဲ။ ငါနေဆဲ 35 မှာဆော့ကစားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ပါပဲ။ ဒါကနှင့်သင့်အနေအထား / အခန်းကဏ္ဍများအတွက်အထူးလေ့ကျင့်။
ငါ့အဘို့ကဆန့်ကျင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးကမ္ဘာ့ဖလားအောင်ပွဲအကြားရွေးချယ်ဖို့ခက်တယ် ဂျပန် နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အာရှဖလားရက်သတ္တပတ်၏စုံတွဲတစ်တွဲလွန်ခဲ့တဲ့အနိုင်ရ။ နေအိမ်မြေပေါ်တွင်ငွေ၏အရေးပါသောအပိုင်းအစအနိုင်ရအစဉ်မပြတ်ငါငါ့အ proudest အချိန်လေးထဲကတစ်ခုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်တစ်ခုခုပါပဲ။
သင်ကမ္ဘာ့ဖလားမှာနယ်သာလန်ဆန့်ကျင်သွင်းယူအဆိုပါရည်မှန်းချက်တော်တော်လေးအံ့သြဖွယ်ပါပဲ! သင်တို့အဘို့, သင်ယနေ့အထိသွင်းယူပါတယ်အရှိဆုံးအမှတ်ရစရာရည်မှန်းချက်အဘယ်အရာဖြစ်သနည်း
ကနယ်သာလန်ဆန့်ကျင်ဂိုးသွင်းဖို့ပဲအဖြစ်အံ့သြဖွယ်အဖြစ်ငါနေဆဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အနိုင်ရသူတို့ရဲ့အရေးပါမှုအဘို့အကြှနျုပျ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၏အကောင်းဆုံးအဖြစ်အပေါင်းတို့၏အများဆုံးဂျာမဏီ 2006 အတွက်ဂျပန်ဆန့်ကျင်ကျွန်မရဲ့ပန်းတိုင်ဘယ်လောက်ရှိသလဲ။
ငါရှန်ဟိုင်း Shenhua နှင့်အတူယခုတရုတ်ကိုသွားနဲ့ကျွန်မယခုအချိန်အထိငါ၏အအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်ခဲ့ပြီးပြီဘာမှတစ်ကယ့်ကိုကွဲပြားခြားနားသောအတွေ့အကြုံရှိသည်နိုင်ဖြစ်ခြင်းမျှော်လင့်တယ်။ ကျနော်ကျိန်းသေတစ်ကယ့်ကိုရှိသည်ဖို့ရှာနေတာ အပြုသဘောဆောင် ပန်းခြံအပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအဖြစ်ကောင်းစွာ!
ဒါကပြောခဲယဉ်းပါတယ်။ ငါတကယ်နည်းနည်းကြီးပြီးကတည်းကအစဉ်မပြတ်ငါတစ်ဘောလုံးသမားဖြစ်ချင်တယ်။ ငါအချို့ကြင်နာတဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆည်းပူးကြမည်ဟုအများဆုံးဖွယ်ရှိထင်ပါတယ်။
ငါ့အဘို့ပြုလုပ်မယ့် အားလုံးချိန်ခွင်လျှာအကြောင်းကို။ ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မကြိုးစားပမ်းစားလေ့ကျင့်, ဒါပေမယ့်ကျွန်မကလေးတွေနှင့်အတူဖီဖာကစားခြင်းအားဖြင့်ထွက်ဟန်ချက်မျှအောင်ပြုလုပ်ပေးကြောင်းသေချာပါစေ။ ငါသမျှတနေ့လုံးရထားကြီးလျှင်, ငါသည်ယခုအားဖြင့်အထဲကကိုမီးရှို့ကြလိမ့်မယ်။
အကြှနျုပျ၏ဒုတိယ-ကြီးကောင်လေး, Shae, တကယ်ကောင်းလှ၏။ ငါသေချာငါသူ့ကိုသိပ်ဖိအားမထားသျောမိမိသွားရာလမ်းတို့ကိုဖြစ်စေခြင်းငှါသူ့ကိုအာကာသပေးစေချင်တယ်။ အကြှနျုပျ၏3နှစ်အရွယ် Cruz ကျိန်းသေ Self-ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်၏, ငါ့မရှိခြင်းမျှဝေ!
ငါသီဆိုကိုချစ်ပြီး ဂီတ။ အကြှနျုပျ၏အကွီးဆုံးယောက်ျားလေး, Kyah တစ်ခုအံ့သြဖွယ်အသံဖြင့်ရှိပြီးငါ့ညီအစ်ကိုတို့နှင့်ငါ့မိသားစုတွေအများကြီးအဖြစ်ကောင်းစွာတကယ်အရည်အချင်းရှိပါတယ်။
တိ Cahill ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts-Bugatti
သူကတစ်ဦး Bugatti Veyron 16.4, ကမ်ဘာပျေါမှာအမြားဆုံး, အစွမ်းထက်စျေးကြီးပြီးအလျင်မြန်ဆုံးလမ်းဥပဒေရေးရာကားတစ်စီးပိုင်ဆိုင်သည်။